Ny fototry ny atidoha: ny neurochemicals, tsarovy aloha ny oroka | Valin'ny Fanamarinana
Tsarovy ny voalobokao voalohany nahafaly anao.
Na aiza na aiza indrindra ny fihaonamben'ny namanao, ny fahatsapana dia mahatsiaro ny zava-drehetra momba izany ... ny toerana, ny fofona, ny tsirony, ny zavatra nataonao, ny fahatsapana ny molotra, ny mozika milalao ary ny fahatsapana ny fifankahazoana sy ny fanantenana ho an'ny ho avy. Mety nitranga izany raha zatovo ianao. Mahafinaritra ny mamy am-pitiavana an'io voalohany io, fa fantatrao ve fa ny kanseran'ny neurochemicals ao amin'ny atidohanao no nanome ny traikefa?
Tsy hanaisotra ny misterin'ny fitiavana hahalalany izany, fa hanampy antsika hahatakatra ny antony mahatonga ny fihetseham-po sy ny traikefa sasany tena matanjaka ary mamorona fahatsiarovana maharitra.
Koa inona no nitranga tamin'izany? Amin'ny fahitana voalohany ny tanjon'ny faniriantsika, ny fontsika dia matory kely kokoa ary mety ho 'nitoloko' bebe kokoa isika na nanomboka nanenjika. Izany no fanevatevana nataonay adrenaline. Ny fiandrasana ny fahafinaretana sy ny valisoa izay nitarika antsika hiditra amin'ny olona iray vaovao, dia voatery nizotra tamin'ny do-get-it neurochemical dopamine. (Ity rohy video ity dia resadresaka nifanaovana tamin'ireo manam-pahaizana izay nahita ny endriky ny fanirian'ny dopamine izay maniry sy mahafinaritra azy.) Dopamine dia manampy amin'ny fametrahana ny fahatsiarovana ny hetsika ara-pihetseham-po, indrindra raha mbola misaintsaina na miresaka momba izany isika. Ny zatovo dia mamokatra dopamine bebe kokoa noho ny olon-dehibe na ny ankizy ary mahatsapa kokoa izany.
Mety ho avy amin'ny tondra-drano ny fahatsapana mahafinaritra momba ny oroka sy ny fofony opioids tao amin'ny foibe valisoa izay nokolokoloina taorian'ny dopamine. Indray, toy ny dopamine, ny zatovo dia mamokatra opioid kokoa noho ny olon-dehibe na ny ankizy.
Ny fahatsapana fifandraisana sy fitokisana izay tonga rehefa mamela olona ho akaiky na akaiky dia avy oxytocin. Raha sambatra sy afa-po ianao raha mieritreritra ny hahita vady mety aminy, dia mety hitombo be izany serotonin ao amin'ny atidoha. Izy io dia miasa rehefa mahatsiaro votoaty na fahatsapana toerana ao amin'ny ambaratongam-piarahamonina ara-tsosialy, toy ny hoe nahita olona ho tia, ny fahafahana ho mpivady. Tsy misy aretina na fanaintainana raha toa ka nanjavona endorphins nipoitra mba hisarihana ny fanaintainana.
Ho tsaroanao io hetsika ara-pihetseham-po io tsara, satria, ho an'ny atidohanao voalohany, dia zava-mitranga eo amin'ny fiainana izany. Hisy lalam-pahatsiarovana lehibe ao amin'ny atidohanao, hampahatsiahy anao ny fihetseham-po mahafinaritra ary hamporisika anao hamerina indray ny fitondrantena indray sy indray.
Inona no nitranga avy eo?
Raha mifankatia ny fitiavanao ary te hanao daty iray, ny fonao dia ho nafototra tanteraka indray miaraka amin'ny fizotran'ny fahasalamana ho an'ny neurochemicals miandry ny fahafinaretana sy ny eritreritrao momba ny hoavy azo antoka ho avy miaraka.
Raha toa ka tsy liana amin'ny fihaonana iray hafa anefa izy dia mety ho namokatra cortisol, ny adin-tsiran-tsiranoka neurochemical koa dia mifandray amin'ny fahaketrahana. Raha mieritreritra ny tsy mijanona amin'ny fomba mahatsikaiky mikasika ny olona na ny toe-javatra ianao, inona no nataon'izy ireo na nataon'izy ireo na tsy nataon'izy ireo, dia mety ho vokatry ny fiantraikan'ny serotonin-tsikelikely. Ity dia hita amin'ny trangam-pandrenesana mampikorontana ihany koa. Ny hatezerana noho ny fahasosoran'ny tanjontsika na ny faniriantsika dia mety hitarika fahavoazana ara-pahasalamana ara-tsaina raha tsy mianatra mieritreritra fomba hafa amin'ny toe-javatra isika.
Be loatra dopamine sy tsy ampy serotonin, ireo mpandala ny fahasalaman'ny "lalan'ny fahafinaretana" sy ny "fahasambarana" ao amin'ny atidoha, dia misy fiantraikany amin'ny toe-tsaintsika. Tadidio anefa fa tsy ny zavatra mahafinaritra sy ny fahasambarana no tsy mitovy. Dopamine no "valisoa" ny neurotransmitter izay miteny amin'ny atidoha hoe: "Mahatsiaro ho tsara izany, te-hanana bebe kokoa aho." Na izany aza dia maro loatra ny fanilikilihana dopamine mitarika ho amin'ny fiankinan-doha. Serotonin no "fifankalozana" amin'ny neurotransmitter izay miteny amin'ny atidoha hoe: "Mahatsiaro ho tsara izany. Manana aho. Tsy mila na tsy mila intsony aho. "Mbola kely ihany anefa ny serotoninina ka lasa ketraka. Ny tsara indrindra dia tokony ho ampy tsara. Dopamine dia mampidina serotonina. Ary ny fihenjanana mitaiza dia mamely ny roa.
Ny fianarana ho afa-po sy tsy mikatsaka ny fanarenana tsy tapaka ny fanentanana dia lesona manan-danja hianarana. Noho izany dia mianatra mitantana ny eritreritsika sy ny eritreritsika ary ny fihetseham-po isika.
Ny boky iray nosoratan'i Loretta Breuning dia nantsoina hoe "Fahasambaram-pahasalamana faly"Ary izy tranonkala Manome fampidiram-po mahaliana amin'ny sainam-pifaliana sy tsy fifaliana.
<< Neuroplasticity Rafitra valisoa >>